Guddiga doorashada heer FEDERAAL oo guddoomiye cusub oo rasmi ah doortay - Caasimada Online
Home Warar Guddiga doorashada heer FEDERAAL oo guddoomiye cusub oo rasmi ah doortay
Guddiga doorashada heer FEDERAAL oo guddoomiye cusub oo rasmi ah doortay
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddiga doorashada heer Federaalka ayaa goor dhaweyd doortay guddoomiye cusub oo rasmi ah kadib codeyn Maanta ka dhacday Xerada Afisyooni ee magaalada Muqdisho.
Tartanka guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa waxaa u tartamay illaa 5 musharax oo kala ah:1- Maxamed Xasan Cirro, 2- Liibaan Axmed Xasan (Liiban Shuluq), 3- Cabdi Xiis Aadan 4- Cabdcasiis Yuusuf, 5- Maxamed Muuse.
Wareegga labaad doorashada ayaa waxaa usoo gudbay Maxamed Xasan Cirro oo helay 12 cod iyo Liibaan Axmed Xasan (Liiban shuluq) oo helay 8 cod.
Wareegga labaad ee doorashada ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Xasan Cirro oo helay 14 cod halka Liibaan Shuluq uu helay 10 cod, sidaasna waxaa guddoomiye ku noqday Maxamed Xasan Cirro oo horeyna usoo noqday guddoomiyihii guddiga doorashada ee la kala diray.
Maxamed Xasan Cirro ayaa xilligii uu noqday guddoomiyaha guddigii doorashada ee muranka dhaliyey ee markii dambe la kala diray waxa uu si xooggan ugu xirnaa Villa Somalia, balse ma cadda waxa hadda arrintaas iska beddelay.
Dhinaca kale, Mowliid Xaaji Mataan ayaa isna ku guulaystay doorashadii gudoomiye ku-xigeynka Guddiga Hirgalinta dorashoyinka Heer Federaal.
Doorashada ayaa si daah furan u dhacday, waxaana agaasinkeeda lahaa Guddiga Farsamada ee isku xirka howlaha doorashada ee Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo si weyn loogu amaanay.